Nhazi Biophilic - Itinye ya na Ulo Gị | Nchọta pụrụ iche, ụlọ ndị pụrụ iche maka ọrịre
Home » Biophilic Design - Na-agbakwunye ya n'ụlọ gị
Ihe December 28, 2018
In Uncategorized, Green Building
Biophilic Design - Na-agbakwunye ya n'ụlọ gị2018-12-282020-05-21https://specialfinds.com/wp-content/uploads/2016/07/SpecialFindsLogo-1.pngNchọta pụrụ iche, ụlọ ndị pụrụ iche maka ọrịrehttps://specialfinds.com/wp-content/uploads/2018/12/20180316_072811.jpg200px200px
Etu esi etinye Biophilic Design na Yourlọ Gị
Iji Nhazi Biophilic na ebe obibi gị bụ akụkụ dị mkpa nke ịmepụta ebe siri ike karị nke na-ejikọta na biorhythms nke ụmụ mmadụ. Tụlee ụkpụrụ ndị a na-ahụ maka ihe ndị dị ndụ na-eme ka ị banye n'ime ụlọ gị. A na-agbasi mbọ ike ime ka ọdịdị dịghachi ndụ. Ị ga-ahụ ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-emepụta ime ụlọ na-ejikọta akụkụ nke okike azụ n'ime oghere dị ndụ iji mee ka ndị mmadụ nwetaghachi ihe ndị sitere n'okike.
Kedu ihe bụ Echiche Biophilic?
Nanị tinye, Nhazi nke ndi ozo bụ omume nke ijikọta ụmụ mmadụ na okike n'ime ebe obibi ha. Ọ bụghị nanị ịgbakwunye ụlọ ma ọ bụ ịmepụta mgbidi dị ndụ ma jiri ọdịdị dị iche iche, ụdị, na agba nke okike mee ihe dị iche iche nke na-akwado ahụike nke ụmụ mmadụ. Ihe ndi ozo di iche iche bu ihe ndi ozo nke na - emekota aka iji mechie njikọ zuru oke n'ime uwa.
Ghọta Ihe Nleta Na-ahụ Maka Ọnụ na Nleta
E nwere ma ahụmahụ na-enweghị isi na ị nwere ike inwe ihe okike n'ime ụlọ gị. Ahụmahụ ndị a na-agụnye ikpughe ìhè, ikuku, mmiri, na osisi yana anụmanụ, ihu igwe, na ebe ọdịda anyanwụ. Ịhụ ìhè site na windo ihe osise ga-abụ ahụmịhe dịka nke ọma na ịchọta ụlọ dị na ebe ndịda mmiri.
Ogologo ihe omumu banyere ihe okike gunyere foto nke ihe omimi landscaping, ndụ, ihe ndị e kere eke, na agba, yana geometries ndị dị ala. Ịhụ ọdịdị dị iche iche site na ụda e dere ede nke mmiri iyi ma ọ bụ igosi ụda osisi n'ime ụlọ ga-abụ ahụmahụ na-enweghị isi.
Ihe Nlereanya Ndị Ọdịdị Ekekọrịta
Inweta Ọhụụ Ọhụrụ
Windows bụ akụkụ dị mkpa nke Nkọwapụta Biophilic ka ha na-enye ohere ịnweta ụdị dịgasị iche iche nke ọdịdị ahụ. Ịmeghe windo ga - ekwe ka ikuku ọhụrụ bata n'ụlọ gị nke ga - ejikọta gị na ọdịdị dị ka ihu igwe dị ugbu a. Anyanwụ ga-abanye n'ime ụlọ gị yana ụda nke ọdịdị dịka nnụnụ na-agbọ ụda, ụda mmiri na-ada, ma ọ bụ ifufe na-efesa. Ijide n'aka na windo nke ụlọ gị dị mfe ịnweta, nakwa dị ka nke ọma maka iji ya eme ihe mgbe nile, dị oké mkpa na Nhazi Biophilic.
Na-eme ka obi sie gị ike
Ọtụtụ ndị na-achọpụta onwe ha chọrọ ịnwekwu oge n'èzí. Ọchịchọ na-eme ka ndụ dị n'èzí dị oke mkpa ọbụna na obere ụlọ ma ọ bụ ihe onwunwe. Ịmepụta oghere dịpụrụ adịpụ nke dị mfe ịnweta ga-eji ugboro ugboro ma jikọta ndị bi na okike n'ụzọ dị omimi. Ịkwụnye ego n'èzí nke na-eche dị ka ihe dị mma dị ka ime ụlọ ga-enyere aka mee ka ókèala dị n'etiti ime ụlọ na n'èzí nke ụlọ.
Ụzọ ọzọ ị ga-esi mee ka ókèala dị n'etiti n'èzí na ime ụlọ dị n'ime ụlọ nwere ike ime site n'ịgbakwunye mpaghara ala na ebe obibi gị. Ịmepụta mkpụrụ osisi ndị dị n'ime ụlọ, nke na-eme nke ọma na ihu igwe gị, ga-enyere gị aka ọ bụghị nanị na ị nwere mmasị maka ọdịdị ụwa, kamakwa na-agba akaebe ndụ pụrụ iche nke ihe ọkụkụ ọ bụla na-egosi. Ụlọ osisi ndị a na-enyekwa aka mee ka ị mata ama osisi nke dị n'ógbè gị na ị ga-amata na jikọọ na kwa ụbọchị.
Nabata usoro ọdịdị
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe ịmalite ịmepụta Biophilic Design n'ime ụlọ bụ ịgbakwunye ụdị okike, ụdị, na agba dị iche iche iji nwee ike ịghọta ọdịdị. Họrọ ịhapụ nkụ ma ọ bụ ịmepụta ụcha agba kama ichota ha. Zere usoro ndị na-adịghị adị na ndụ ma nabatara okike okike na ezughị okè na ụdị. Gbakwunye mpaghara ebe obibi gị dị ka nke na-arụ ọrụ na mgbidi, ngwugwu mgbidi, ma ọ bụ ihe ndị dị n'akụkụ mpaghara nke ụdị ụdị mma ị hụrụ ebe a na-ahụ maka ebe obibi. Jiri ụdị ihe dị iche iche na-abanye n'ụlọ gị site n'iṅomi ntụgharị nke ebili mmiri, shells, ma ọ bụ osisi na ọtụtụ akụkụ nke ụlọ ahụ.
Mee ka Ịdị n'Otu Dị n'Ebe Ohere
Ọzọkwa, Ekepụta Biophilic abụghị nanị ịhọrọ otu n'ime akụkụ ndị a iji tinye n'ime ụlọ gị kama ọ bụ ịkebe ihe dị iche iche ọnụ n'ụzọ dị mgbagwoju anya. Họrọ ihe iji gbakwunye na ụlọ gị nke nwere uche ọ bụghị naanị gị kamakwa onye ọ bụla ọzọ iji nweta ọtụtụ uru. Gbalịa ime ohere ọ bụla nke ezinụlọ gị nwere ihe dị iche iche dị iche iche nke Biophilic Design bụ ndị dị aghụghọ ma bụrụ ndị a na-ahụ anya ịchọta nkwekọrịta n'ime uche na ọdịdị dị n'ụlọ.
E nwere ọtụtụ akụkụ nke Kere Biophilic nke na-emepụta ụzọ dị oke mgbagwoju anya iji jikọta ya na okike n'ime oghere ime. Tụlee atụmatụ ndị a iji jikọta atụmatụ Biophilic n'ime ụlọ gị iji jikọta ọnụ na okike kwa ụbọchị.
Ken Morris bụ onye na-enye onye ọbịa, onye na-elekọta ubi, na onye ọkachamara na-ese onyinyo nke na-ahụ n'anya na-ekere òkè n'uto nke okike.
ihe ndị dị ndụ, ihe osise biophilic, ime ụlọ obibi
Kọwaa ụlọ iji weta ya dị ndụ!
Oldzụta eslọ Pụrụ Iche - Creativezọ Okike
Ịzụta Njirimara Ugwu Na-adịghịUncategorized
Tainlọ Akpa MbupuNdị na-adịghị iche, Green Building